Kugadzirwa kwemabhuku akadhindwa kunosvibisa nharaunda | Green Renewables
Nuria | | Imba yeGreen, Environment, Nyowani matekinoroji
Ikozvino pane kukakavara kunonakidza maererano nekushandiswa kwe e-bhuku. Izvo ndezvekukakavadzana kusingaperi pakati pekuwandisa kwe itsva technologies mu "kubaira" kwetsika, tsika dzekare netsika dzeupenyu hwese, nevekupedzisira ndinoreva kuzvidzivirira kusingazungunuke uko vateveri rakadhindwa bhuku vachipokana kuti mabhuku emagetsi, e-mabhuku, anobvisa mafaro kubva mukutenga nekuverenga bhuku chairo.
Chero angave mafungiro edu, WellHome yakaburitsa infographic (muChirungu) iyo inopa ruzivo rwakakosha runogona kutibatsira kutora chinhanho panhau. Iyo data WelHome inounganidza inoreva kumusika weUS.
Kugadzirwa kwemabhuku akadhindwa
- Iyo indasitiri yekutsikisa inoshandisa mamirioni gumi nematanhatu ematani emapepa pagore.
- mabhiriyoni maviri emabhuku akadhindwa anogadzirwa pagore zvinoreva kuti miti mamiriyoni makumi matatu nemaviri anotemwa.
- Akadhindwa mabhuku ane iyo ecological tsoka Yakakwira kwazvo pachikamu cheiri rese indasitiri yekutsikisa, bhuku rega rega rinogadzira 8,85 mapaundi ekabhoni dhayokisaidhi, CO2.
- Mafekitori anogadzira pepa remabhuku anokuvadza nharaunda nekuti anoburitsa CO2, nitrogen oxide uye carbon monoxide, izvi zvinosvibisa enda pamhepo uye ubatsire kune kupisa kwepasi pose, mhute, acid mvura uye zvirwere zvekufema.
- Kuchenesa pepa neklorini kugadzira pepa jena nemabhuku anogadzirwa, kunogadzira dioxin, inozivikanwa carcinogen iyo inodzikisira zvakanyanya.
- Mabhuku akadhindwa anoshandisa zvakapetwa katatu mbishi zvinhu uye anoda mvura kakapetwa kanomwe pane zvakafanira kugadzira e-mabhuku.
- Iyo indasitiri yemapepa, kazhinji, inodimbura 125 mamirioni emiti uye inoburitsa matani emamirioni makumi mana nemana eEC44, zvakaenzana nekuburitsa kwemamirioni 2 emota mugore rimwe chete.
Izvi ndizvo zvikonzero nei WellHome ichidzivirira kuti e-bhuku iri sarudzo yekuwedzera, mune inotevera posvo Ini ndinonyora zvikonzero zvaanopikisa chinzvimbo chake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Kugadzirwa kwemabhuku akadhindwa kunosvibisa nharaunda
Musoro Jimenez akadaro
Izvi zvakashata kwazvo, haina ruzivo rwakakwana, zvekuti yakaiswa, zvakanaka.
net yakashata kwazvo
Pindura subjey jimenez
Kutanga mwenje wemagetsi emagetsi muArgentina